မင်္ဂလာသတင်းကို EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ဇြန္လ 2, 2020
ပင်မစာမျက်နှာမင်္ဂလာသတင်းကို EAမင်္ဂလာသတင်းကို EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် မင်္ဂလာသတင်းကို EA 2
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဇွန်လ 2020
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဇွန်လ 2020 - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ - FX စက်ရုပ်
ငွေကြေးစွမ်း: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD နှင့် USDJPY
ရရှိနိုင်ပါသည်မင်္ဂလာသတင်းကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
မင်္ဂလာသတင်းကို EA ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - News Trading အတွက်အမြတ်အစွန်းကျွမ်းကျင်သည့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
မင်္ဂလာသတင်းကို EA တစ်ဦးသည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး မင်္ဂလာ Forex Group မှ.
ဤ Forex စက်ရုပ် မသက်ဆိုင်လွှတ်ပေးရန်၏ရလဒ်ကို၏, သငျသညျအလိုအလြောကျသတင်းကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ EA ၏တည်ရာအရပ်သတင်းဟာ FX စျေးကွက်မှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါက, သင်သတ်မှတ်ပါနှင့်အရှိန်အဟုန်တွင်လက်ငင်းငွေချေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်အတွက်အမိန့်ဆိုင်းငံ့။
မင်္ဂလာသတင်းကို EA အတူအလုပ်လုပ်နိုင် EURUSD, GBPUSD, AUDUSD နှင့် USDJPY 15 မိနစ်အချိန်ဘောင်အပေါ်ငွေကြေးအားလုံး။ ဤ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး မည်သည့်ပွဲစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အနိမ့်န့်နှင့်အတူပွဲစားများကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါသည်။ သငျသညျမိနစ်အတွင်းအလွယ်တကူ setup ကိုအရာအားလုံးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမင်္ဂလာ Forex ထောက်ခံမှုအဖွဲ့အမြဲသင့်ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါ!
ဒီအသုံးပြုခြင်း Forex တဲ့ Expert Advisor စိတ်ခံစားမှု, အနုတ်လက္ခဏာခွအေနမြေား, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များဖြည့်ဆည်းရန်ပင်လိုအပ်သဖြင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာ 100% ဈေးကွက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်စောင့်ရှောက်။
မင်္ဂလာသတင်းကို EA သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make မင်္ဂလာသတင်းကို EA နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် မင်္ဂလာသတင်းကို EA အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ မင်္ဂလာသတင်းကို EA အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ 24 /5ပေါ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
မင်္ဂလာသတင်းကို EA - ထရေးဒင်း Logic, Setup ကိုထိုအခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, မင်္ဂလာသတင်း တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သငျသညျအလိုအလြောကျသတင်းကုန်သွယ်မှုဖို့ခွင့်ပြုသော Metatrader4(MT4) ပလက်ဖောင်းဘို့။ အဆိုပါသတင်းကိုအလိုအလျောက်ကဲ့သို့သောဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အွန်လိုင်းနေရာတွေကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နေကြတယ် Forex စက်ရုံ (http://www.forexfactory.com/calendar.php) ပြီးတော့သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ဦးစားပေးအညီပြ။ သင်အားလုံးသတင်းမြင်ကုန်သွယ်မှုချင်ရှိမရှိရှေးခယျြ, သို့မဟုတ်ဇယားပေါ်ရှိလက်ရှိ pair တစုံနှင့်ဆက်စပ်သောရုံမြားကိုနိုငျသညျ။
မင်္ဂလာသတင်းကို EA သငျသညျသတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်ဥစ္စာတိုးပွားခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
ဤ FX စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအ EURUSD, GBPUSD, AUDUSD နှင့် USDJPY အားလုံး။ terminal ကိုအတွက်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေလိုအပ်ချက် $ 1000 ဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် $ 1000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မဟုတျပါလျှင်, သင်ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုသည်။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာသတင်း v1.1
အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည်: SetPendingSecondsBeforeNews, PendingDistanceFromPrice, DeleteUntriggeredPendingsAfterNews သတင်း Filter ကိုတည်ဆောက်ပုံ (HighImpact, MediumImpact, LowImpact, IncludeSpeaks)
ပြင်ဆင်ချက်: တစ်ချိန်တည်းမှာမြင့်မားတဲ့သတင်းနှစ်ခု / သုံးဘို့တစ်ဦးတည်းသာဆိုင်းငံ့ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာသတင်း v1.2
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာသတင်း v1.3
အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည်: အချက်ပေး Options ကို: AlertSecondsBeforeNews, SoundAlert, SoundFile, PopupAlert, EmailAlert, PhoneAlert
အသစ်ကငွေကြေးအားလုံးကဆက်ပြောသည်: GBPUSD, AUDUSD, USDJPY
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာသတင်း v1.3.1
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် မင်္ဂလာသတင်းကို EA ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအာမခံချက်တစ်ဦး၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 85% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာသတင်းကို EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ€ 209.30 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်မင်္ဂလာသတင်းကို EA က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု
3 1 မဲပေး
HAPPY သတင်း EA ၏သုံးသပ်ချက် - သတင်းများ TRADING performance UPDATE + 14.2% MONTHLY Return (! အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်အကျိုးအမြတ်ရ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသတင်းများ! မင်္ဂလာသတင်းကို EA - သတင်းထရေးဒင်းအကျိုးအမြတ်ရကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးလစဉ်သို့ပြန်သွားသည်ဤနေရာတွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဆုကြေးငွေ Get% 14.2 ကိုပေးသနား: https://www.bestforexeas.com/happy-news-ea-review/ မင်္ဂလာသတင်းကို EA ဟာအစွမ်းထက် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနေသူများကဖန်တီး အဆိုပါမင်္ဂလာ Forex Group ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များက။ ဤသည် Forex စက်ရုပ်ကိုသင်မသက်ဆိုင်လွှတ်ပေးရန်၏ရလဒ်ကို၏အလိုအလျောက်သတင်းကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါသတင်း FX မှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါကသို့မှသာအဆိုပါ EA ၏သောအရပ်တို့ကိုမနှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်အတွက်အမိန့်ဆိုင်းငံ့... ဆက္ဖတ္ရန္
HAPPY သတင်းကို EA - အမြတ် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - ဒီဇင်ဘာ 2017 UPDATE ခရစ္စမတ်အထူးကမ်းလှမ်းချက် 2017 - 30% OFF ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! မင်္ဂလာသတင်းကို EA ယခုလျှော့စျေးနှုန်းမှာမရရှိနိုင်ပါ! ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/happy-news-ea-review/ မင်္ဂလာသတင်းကို EA ဟာမင်္ဂလာ Forex Group ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအားကောင်းတဲ့ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်။ ဤသည် Forex စက်ရုပ်ကိုသင်မသက်ဆိုင်လွှတ်ပေးရန်၏ရလဒ်ကို၏အလိုအလျောက်သတင်းကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ EA ၏တည်ရာအရပ်သတင်းဟာ FX စျေးကွက်မှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါက, သင်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်အတွက်အမိန့်ဆိုင်းငံ့... ဆက္ဖတ္ရန္